नेपालका विश्व चर्चित क्रिकेटर सन्दिपको आँखाको लेजर शल्यक्रिया – Health Television
नेपालका विश्व चर्चित क्रिकेटर सन्दिपको आँखाको लेजर शल्यक्रिया
२६ नोभेम्वर, २०१९. तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको रिफ्र्याक्टिभ सर्जरी युनिटमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेको आँखाको लेजर सर्जरी (ReLEx SMILE) यहि सोमबार गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका रिफ्र्याक्टिभ सर्जन डा.शाश्वत ढुंगेलले उनको सर्जरी गरेका हुन् । डा. शाश्वत भन्नुहुन्छ, “ लेजर सर्जरीमा यो एकदमै नयाँ पद्दती हो जुन नेपालमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा मात्र उपलब्ध छ । आँखामा पावर भएको र चश्मा लगाउन नचाहनेका लागि लेजर सर्जरी सेवा एकदमै प्रभावकारी रहेको छ । यो सर्जरी –०.५ देखि –१४ सम्मको पावर भएकालाई गरिन्छ । लेजरको अरु पद्दती भन्दा यो पद्दतीमा सुख्खापन कम हुने,घाउ छिटो पुरीने आदि हुन्छ ।”
सन्दिपको उपचारका सन्दर्भमा डा.शाश्वत भन्नुहुन्छ शल्यक्रिया पश्चात दृष्टिक्षमता (भिजन) एकदमै राम्रो आएको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकहरुमा यो एकदमै महंगो प्रविधि भएकोले शल्यक्रिया शुल्क पनि महंगो छ तर नेपालमा प्रतिष्ठानले अन्य मुलुकभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराएको छ । त्यसैले विश्वका धेरै मुलुकहरुबाट विदेशी तथा गैरआवासिय नेपालीहरु यस शल्यक्रिया गराउन प्रतिष्ठान आउने गरेका छन् ।
प्राय जसो गैरआवासिय नेपालीहरु विदेशमा शल्यक्रिया गराउँदा लाग्ने खर्चले नेपाल भ्रमण लगायत परिवार आफन्तजन तथा साथीभाईसँगको भेटघाट र आँखाको उपचार पनि हुने भएकोले बढी आउने गरेका छन् । विदेशीको हकमा पनि शल्यक्रिया साथै नेपाल भ्रमण दुवै हुने भएकोले यसले नेपालको मेडिकल टुरिजम ( स्वास्थ्य पर्यटन) लाई पनि टेवा पुर्याएको छ । नेपालमा यो सेवा शुरु हुनु अगाडि धेरै नेपालीहरु विदेश जाने गर्थे । अहिले प्रतिष्ठानमा उपलब्ध यस सेवाले गर्दा विदेशीने रकम नेपाल भित्रै रहने भएको छ ।
शल्यक्रिया पश्चात सन्दिप लामिछानेको अनुभव यस्तो रहेको छ,“टाढाको वस्तु देख्न समस्या भएपछि चश्मा लगाउनुको विकल्पमा मैले यो सर्जरी गरेको हुँ । विदेशमा पनि बुझेको थिए यस सम्बन्धी तर आफ्नै देशमा गर्ने सोच भएको यहाँ गराए । म एकदमै खुशी तथा सन्तुष्ठ छु । शल्यक्रिया पश्चात भिजनमा सुधार भएको छ ।”
चश्माको कारणले गर्दा आफ्नो दैनिक जिवन, पेशा, रुचिका क्षेत्र आदिमा कठिनाई सामना गरिराख्नुपर्ने व्यक्तित्वहरुले यो सेवा लिएर चश्मामूक्त जिवन बिताउन सक्नेछन् ।